Chii chinonzi 'Carrier Settings Kugadziridza' Pane An iPhone? Hechino Chokwadi! - Iphone
maapplication haazogadzirise pane ipad
mumhanzi weapuro usinga shande ios 10
zvinorevei kurota uine nhumbu
hope dudziro honye dzichikambaira kubuda ganda
sprint iphone 7 hapana sevhisi
Iwe unobatidza yako iPhone uye nekukurumidza uone pop-up iyo inoti, 'Carrier Settings Kugadziridza'. Zvakanaka, marongero matsva anowanikwa - asi meseji iyi inorevei, uye unofanirwa kugadzirisa? Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei ichiti 'Zvigadziriso zveMutakuri' pane yako iPhone , zvinoitwa nemutakuri zvigadziriso zvinoita kune yako iPhone , ndokukuratidza maitiro ekutarisa macustomer marongero ekuvandudza mune ramangwana.
Chii chinonzi 'Yekutakura Zvirongwa Kugadziridza'?
Paunoona chenjedzo inoti 'Zvigadziriso zveMutakuri' pane yako iPhone, zvinoreva kuti Apple kana yako isina waya inotakura (Verizon, T-Mobile, AT&T, nezvimwewo) vaburitsa gadziriso ine marongero matsva anotakura ayo achabatsira kuvandudza yako iPhone's kugona kubatanidza kune yako isina waya mutakuri network.
Semuenzaniso, kana iwe uri paAT&T, unogona kuona meseji inoti 'AT & T mutakuri kugadzirisa' kana 'ATT mutakuri kugadzirisa'.
Izvo Zvakakosha Kuti Gadzirise Ekutakura Zvirongwa Pane My iPhone?
Kana mutakuri wako asina waya akagadzirisa tekinoroji yavo, yako iPhone zvakare inofanira kugadzirisa kuitira kuti ubatanidze neiyo nyowani tekinoroji. Ukasaita marongedzero eanotakura, yako iPhone inogona kusakwanisa kubatanidza kune zvese zvinopihwa nemutakuri wako usina waya. Nekudaro, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti unoita macustomer marongero ekugadzirisa eiyo iPhone yako muna 2020 uye nekuisa iwo matsva anotakura marongero.
Uyezve, inogadziridza marongero ekugadzirisa pane yako iPhone anogona zvakare kuunza maficha manyowani senge kufona kweWi-Fi kana izwi-pamusoro-LTE, kana gadzirisa mapumburu esoftware uye glitches izvo zviri kukonzera matambudziko kune vazhinji vashandisi ve iPhone.
Ndingaite Sei Ini Kuti Ndizive Kana Iyo Yekutakura Ekumisikidza Zvirongwa Iripo?
Kana marongero ekutakura akawanikwa, iwe unowanzo gamuchira pop-ups ezuva nezuva pa iPhone yako inoti, 'Yekutakura Yekugadzirisa Zvirongwa: Zvirongwa zvitsva zviripo. Mungada kuvandudza izvozvi? ”
Asi ko kana iwe unoda kutarisa kuti marongero ekutakura anovandudza nemaoko? Iko hakuna bhatani re 'Tarisa Zvekutakura Zvekufambisa' chero pairi iPhone yako. Iko kune, zvisinei, imwe nzira yekutarisa:
Kuti utarise zvekumisikidza zvekutakura pane yako iPhone, vhura iyo Zvirongwa app uye tapota General -> About. Kana paine zviripo zvekutakura marongero ekugadzirisa pane yako iPhone, pop-up ichaonekwa pachiratidziri ichibvunza kana iwe uchida kugadzirisa. Kana 15-30 masekondi akapfuura uye pasina pop-up inoonekwa pane yako iPhone, izvo zvinoreva kuti panogona kunge pasina nyowani yekugadzirisa marongero ekugadzirisa eiyo iPhone yako muna 2020.
Ini Ndinovandudza Sei Ekutakura Zvirongwa Pane My iPhone?
Kuti uvandudze anotakura marongero pane yako iPhone, tinya Kwidziridza apo yambiro inoonekwa pachiratidziri. Kusiyana nezvimwe zvinogadziridzwa kana kugadziriswazve, yako iPhone haizotangise mushure mekugadziriswa kweanotakura.
Maitiro Ekutarisa Kana iyo iPhone Inotakura Zvirongwa Zviri Kusvika Kusvikira
Kana usina chokwadi kuti kana marongero eanotakura akagadziridzwa here, ita izvi:
Dzorera yako iPhone uye udzokere zvakare nekudzvanya bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima inowanikwa pachiratidziro che iPhone yako. Wadaro, Rova zvakasimba iro dzvuku simba ikoni kubva kuruboshwe kurudyi kuvhara iPhone yako.
Mirira anenge masekondi makumi matatu, uye dzosera yako iPhone kumashure nekudzvanya uye kubata bhatani remagetsi kudzamara Apple logo yaonekwa yakananga pakati pekuratidzwa kweiyo iPhone yako.
Wobva wavhura iyo Zvirongwa app uye tap General -> About . Kana chenjedzo isinga pop-up pachiratidziri ichiti inogadziridza marongero ekugadzirisa anowanikwa pane yako iPhone, izvo zvinoreva kuti marongero ako eanotakura aripo.
Marongero Ekutakura: Yakagadziridzwa!
Zvigadziriso zvako zvekutakura zviri zvenguva uye inotevera nguva iwe uchazoziva zvazvinoreva kana iPhone ikati 'Zvigadziriso zveMutakuri'. Ndingafarire kunzwa kubva kwauri muchikamu chemashoko pazasi, uye usakanganwe kutevera Payette Pamberi pasocial media mapuratifomu eakanakisa iPhone zvemukati pane internet!